Fampiofanana mitohy :: Hampianatra kabary manaraka lohahevitra ny etsy Andavamamba • AoRaha
Fampiofanana mitohy Hampianatra kabary manaraka lohahevitra ny etsy Andavamamba
Nampifanarahana amin’ny toe-java-misy ankehitriny ny fomba fampianarana kabary. Hanatanteraka fampianarana mitohy, ohatra, ny Alliance française etsy Andavamamba (AFT) sy ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy (Fimpima). Misokatra ho an’ny ankizy 8 taona no mihoatra sy ny tanora ary ny lehibe am-perinasa ny fampianarana. Telopolo ora ny faharetan’ny fampianarana. Adiny roa isan-kerinandro no hanaovana azy ao amin’ny AFT Andavamamba. Samy manana ny fandaharam-potoanany sy ny lohahevitra hohalalinina ny sokajy tsirairay.
Mifantoka amina teboka telo ny fampianarana ho an’ ny ankizy (8 ka hatramin’ny 12 taona) dia ny an-kanonona sy an-kifidy ary ankamantatra, ny ohabolana sy ny fomba fitenenana ary ireo fomba fiarahabana samihafa. Isaky ny alarobia tolakandro ny andro fianarana ho azy ireo. Miainga amin’ ny fandalinana ny ohabolana sy ny haiteny, ny kabary, mandalo ny fomba fitenenana andavanandro sy ny kabary amina lanonana samihafa ary mifarana amin’ny famangiana fahoriana ny ny fandaharam-pianarana ho an’ny tanora (13 ka hatramin’ny 16 taona). Isaky ny sabotsy maraina ny andro fianarana.
Mizara telo ny lohahevitra ianarana ho an’ny sokajy lehibe (17 taona no mihoatra). Ny kabary sy ny mpikabary ary fomba fitenenana andavanandro. Manampy ireo ny fandalinana kabary samihafa, toy ny lanonana, fisaorana, fiarahabana, fitokanana ary ny kabary am-panambadiana. Ny sabotsy maraina sy ny zoma hariva ny ora fianarana ho an’ity sokajy ity.
Mbola misokatra ny fisoratana anarana etsy amin’ ny AFT Andavamamba ho an’izay mandala sy liana amin’ ny fandaharan-teny malagasy. Hanomboka amin’ny 11 janoary 2020 ny fampianarana. Mitentina 60 000 ariary isan’olona kosa ny saran’ny fampiofanana.
Vaky boky any Mahajanga :: Manomana fifaninanana manoratra tantara ny « Opération Bokiko »
Kitra – «UEFA Champions League» :: Saika lalao goavana avokoa ireo fihaonana vokatry ny antsapaka